Amit Khanna Amanqaku kwi Martech Zone |
Amanqaku ngu Amit Khanna
U-Amit Khanna nguMongameli wezoShishino oluNcinci noluPhakathi e Isiphene Apho anoxanduva lokuqhuba ingeniso kwinxalenye enkulu yenkampani kunye nokuphuhlisa ubudlelwane obunelayisensi. Uye wakhokela ezimbini eziphumeleleyo kwimveliso yeSoftware-njenge-a-Service, InfoUSA kunye ne-Salesgenie.
Iimpazamo ezintlanu eziPhambili kwiNkqubo yokuThengisa nge-imeyile kufuneka uyiphephe
NgoLwesithathu, Oktobha 29, 2014 NgoLwesithathu, Oktobha 29, 2014 Amit Khanna
Ngabasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezingama-222 e-US kuphela, i-imeyile inamandla amakhulu njengeqonga lokuthengisa. I-imeyile sisixhobo esiguqukayo esinokusetyenziselwa ukufudumeza izikhokelo ezibandayo, ukunxibelelana nabathengi abakhoyo kunye nokufikelela kumathemba okuqhuba uphuhliso lweshishini elitsha. Iingcali zokuthengisa nge-imeyile ziyaziqonda iziseko, ezinje ngokubaluleka kokwenza umgca wesifundo esinyanzelayo kunye nokubandakanya umnxeba onamandla wokuthatha isenzo. Kodwa nabarhwebi be-imeyile abanomdla bangawa